भोलिदेखि फेरि लकडाउन गर्ने निर्णय : बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका यी क्षेत्र बन्द हुने ! – Sandesh Press
August 6, 2021 511
मुम्बईमा वर्षाका कारण लगातार दोस्रो दिन पनि ठूलो क्षति भएको छ । सोमबार ठाणेस्थित कलवामा एक घरमा पहिरोमा परेर एकै परिवारका ७ जना पुरिएका छन् । यसमध्ये ५ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा ३ वर्षका बच्चा पनि छन् । ५ वर्षका प्रिति र १८ वर्षका अचललाई भने पहिरोबाट सुरक्षित निकालिएको छ । यसअघि आइतबार चारवटा अलग घटनामा ३० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यता, उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्लाको मान्डो गाउँमा आइतबार चट्याङका कारण ३ जनाको मृत्यु भएको छ, चारजना बेपत्ता छन् । एसडिआरएफको टिम उद्धार कार्यमा सक्रिय छ । उत्तराखण्डका धेरै हिस्सामा पछिल्ला केही दिनदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ । गङ्गा, यमुना, भागीरथी, अलकनन्दा, मंदाकिनी, पिन्डर, नन्दाकिनी, टोन्स, सरयू, गोरी, काली, रामगंगालगायत नदीहरूको सतह बढेर खतरा सिर्जना गरिरहेको छ ।मुम्बईमा वर्षाका कारण लगातार दोस्रो दिन पनि ठूलो क्षति भएको छ । सोमबार ठाणेस्थित कलवामा एक घरमा पहिरोमा परेर एकै परिवारका ७ जना पुरिएका छन् । यसमध्ये ५ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा ३ वर्षका बच्चा पनि छन् । ५ वर्षका प्रिति र १८ वर्षका अचललाई भने पहिरोबाट सुरक्षित निकालिएको छ । यसअघि आइतबार चारवटा अलग घटनामा ३० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यता, उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्लाको मान्डो गाउँमा आइतबार चट्याङका कारण ३ जनाको मृत्यु भएको छ, चारजना बेपत्ता छन् । एसडिआरएफको टिम उद्धार कार्यमा सक्रिय छ । उत्तराखण्डका धेरै हिस्सामा पछिल्ला केही दिनदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ । गङ्गा, यमुना, भागीरथी, अलकनन्दा, मंदाकिनी, पिन्डर, नन्दाकिनी, टोन्स, सरयू, गोरी, काली, रामगंगालगायत नदीहरूको सतह बढेर खतरा सिर्जना गरिरहेको छ ।
Prevयो त अति भएन र ? गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका ससुराको निधनमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा
Nextभगवान शिव बस्ने गुफा , एक पटक छिरेपछि फर्केर आउँदैनन् काेही , ॐ लेखी सेयर गर्नेहाेला
यिनै हुन् आज अश्रुग्यास र गो लि प्र हार बाट मृत्यु भएकी नविना चौधरी